မူလစာမျက်နှာ > ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဈေးနှုန်းများ > ပရိုမိုးရှင်း
၃% ပြန်အမ်းငွေလက်ဆောင် ပရိုမိုးရှင်း
MyTelenor App နှင့် Telenor Website တွင် ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း၊ ဖုန်းဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်းများကို Wave Pay ဖြင့်ပြုလုပ်ပါက 3% promotion ကိုရယူလိုက်ပါ။
WavePay account ရှိသူ Telenor SIM အသုံးပြုသူများအားလုံး Promotion တွင်အကျုံးဝင်ပါသည်။
ဖုန်းငွေဖြည့်ရန် လုံလောက်သော Wave Pay balance ရှိရပါမည်။ ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပြီးချိန်တွင် ဖုန်းငွေဖြည့်သော ပမာဏဧ။် 3% အား Wave Pay balance ထဲသို့ ချက်ချင်းပေါင်းထည့်ပေးသွားပါမည်။
Promotion ကာလမှာ September ၂၀ ရက်နေ့မှစပါသည်။
Promotion နှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များအား SMS ဖြင့်လည်းကောင်း၊MyTelenor App Push Notification ဖြင့်လည်းကောင်း အကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ Telenor ဧ။်တရားဝင် Facebook Page တွင်လည်း ကြော်ငြာသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အမေး၊ အဖြေ ကဏ္ဍ
Promotion ကာလသည် September ၂၀ ရက်နေ့မှစပါသည်။
အခြားငွေပေးချေမှုများသည်လည်း Promotion တွင်အကျုံးဝင်ပါသလား?
အခြားငွေပေးချေမှုများသည် တွင်အကျုံးမ၀င်ပါ။ Wave Pay တစ်ခုတည်းသာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
အခြားဖုန်းနံပါတ်သို့ ငွေဖြည့်ပေးပါက Cash-Back Promotion ရနိုင်ပါသလား?
မိမိဧ။်ဖုန်းကိုဖြစ်စေ၊ အခြားဖုန်းကိုဖြစ်စေ Wave Pay ငွေပေးချေမှုဖြင့် Promotion ရနိုင်ပါသည်။
Wave system push notification မရပါက မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမလဲ?
Wave Pay App တွင် Login ၀င်ပြီး Inbox ထဲတွင်စစ်ဆေးပါ။
Cash-Back promotion လက်ခံရရှိမှု ရှိမရှိကို မည်သို့စစ်ဆေးရမလဲ?
Wave Pay လက်ကျန်ငွေအားစစ်ဆေးခြင့်ဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။
Telenor Website တွင် Computer ကိုအသုံးပြုပြီး Top Up လုပ်ဆောင်ပါက Wave System Push Notification ကို မည်သို့ ရရှိမလဲ?
Wave system push notification အား သင်ဧ။် Wave Pay App သွင်းထားသော ဖုန်းထဲသို့ ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
၂၅% ဖုန်းဘေလ်ပြန်အမ်းငွေလက်ဆောင် ပရိုမိုးရှင်း
Yoma SMART အကောင့် ပိုင်ရှင်များအတွက် အထူး ပရိုမိုးရှင်းကို စတင်ဘာလ ၁၀ ရက် နေ့မှ ၃၀ ရက် နေ့အထိ ပြုလုပ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားသောသူများမှ WavePay အကောင့်ဖွင့်ပြီး Yoma SMART အကောင့်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါက ယခု အထူးပရိုမိုးရှင်း ကို ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။ ပြန်အမ်းငွေလက်ဆောင် ပရိုမိုးရှင်းကိုတော့ Yoma SMART အကောင့်နှင့် WavePay အကောင့်ချိတ်ဆက်ထားသူများ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ၂၀၁၉ ထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ပိုမိုသိရှိစေရန်အတွက် အမေး၊ အဖြေ ကဏ္ဍတွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၁) သတ်မှတ်ထားသော Yoma SMARTအကောင့်ပိုင်ရှင် WavePay အကောင့်မ၇ှိသူများသာ အကျူံးဝင်ပါသည်။
၂) SMS လက်ခံရရှိသော သူများသာ အကျူံးဝင်သော အကောင့်ပိုင်ရှင်များ ဖြစ်ပါသည်။
၃)ပ၇ိုမိုးရှင်းအတွက် Yoma ဘဏ်မှ SMS လက်ခံရရှိသော သူများသာ အကျူံးဝင်ပါသည်။
၄) WavePay အကောင့်ဖွင့်ပြီး Yoma SMART အကောင့်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသူများသာ ပြန်အမ်းငွေလက်ဆောင် ပ၇ိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
၅) စတင်ဘာလ ၁၀ ရက် နေ့မှ ၃၀ ရက် အတွင်း WavePay အကောင့်ဖွင့်ပြီး Yoma SMART အကောင့်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသူများသာ ပြန်အမ်းငွေလက်ဆောင် ပ၇ိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
၆) WavePay အကောင့်မှ အများဆုံး ၁၀,၀၀၀ ကျပ်ထိ ဖုန်းဘေလ် ၀ယ်ယူသော သူများသာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
၇) Customer တစ်ယောက်လျှင် တစ်လအတွင်း အများဆုံး ၁၀,၀၀၀ ကျပ်ထိ ပြန်အမ်းငွေလက်ဆောင် ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။
၈) ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ပြီး ရုံးဖွင့်ရက် ၂-၃ ရက် အတွင်း WavePay အကောင့်ထဲသို့ ပြန်အမ်းငွေလက်ဆောင်အား ဖြည့်သွင်းပေးပါသည်။
၉) Yoma Smart အကောင့်နှင့် WavePay အကောင့်တို့ချိတ်ဆက်ရာတွင် လူကြီးမင်းတို၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအသုံးပြူချင်းကို သဘောတူရပါမည်။
၁၀) ပြန်အမ်းငွေလက်ဆောင် ပရိုမိုးရှင်း အတွက် ငြင်းပွားဖွယ် တစ်စူံတစ်ရာ ရှိခဲ့ပါက Yoma bank နှင့် Wave Money ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသာ အတည်ပြုပါမည်။
၁) ပရိုမိုးရှင်း အကြောင်းရှင်းပြပါ?
ချစ်မိတ်ဆွေများရှင့် … ပရိုမိုးရှင်းကတော့ Yoma SMART အကောင့်ရှိ်ပြီး WavePay အကောင့် မရှိသေးသူများအတွက်သာရှိပါသည်။ WavePay အကောင့်ဖွင့်ပြီး Yoma SMART နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ WavePay အကောင့်နဲ့ ဖုန်းဘေလ်ဝယ်တာနဲ့ ၂၅% ပြန်အမ်းငွေလက်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂) ဘယ်သူတွေက ယခု ပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်ခွင့်ရှိပါသလဲ?
အခုအချိန်မှာတော့ Yoma SMART account customer များတွင် WavePay အကောင့် မရှိသေးသူများအတွက်သာ ပရိုမိုးရှင်း ရှိပါတယ်။
၃) WavePay အကောင့် ရှိပြီးသားသူတွေရော ပါဝင်လို့ ရပါလား?
၂၅% ပြန်အမ်းငွေလက်ဆောင်ကို WavePay အကောင့််သစ်ဖွင့်ပြီး ဖုန်းဘေလ်ဝယ်ယူခြင်း ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။ ဒါပေမယ့် Yoma SMART account နှင့် WavePay အကောင့်ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ပြီး ငွေသွင်း၊ငွေထုတ်ခြင်းကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၄) ဒီပရိုမိုးရှင်းက customer တွေအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးရှိပါသလဲ?
WavePay အကောင့်ဖွင့်ပြီး Yoma SMART နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ WavePay အကောင့်နဲ့ ဖုန်းဘေလ်ဝယ်တာနဲ့ ၂၅% ပြန်အမ်းငွေလက်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းဘေဘ်ဖြည့်သွင်းခြင်းအတွက် ပြန်အမ်းငွေလက်ဆောင်ကို ၁၀,၀၀၀ ကျပ်ထိ အများဆုံး ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၅) ပရိုမိုးရှင်း ကာလ က ဘယ်နေ့ အထိလဲ?
ပရိုမိုးရှင်းအနေနဲ့ကတော့ WavePay အကောင့်ဖွင့်ပြီး ( စတင်ဘာလ ၁၀ ရက် နေ့မှ ၃၀ ရက် အတွင်း) Yoma SMART အကောင့်နှင့် WavePay အပေကာင့်အား ချိတ်ဆက်ရပါမည်။ သတ်မှတ်ထားသော ရက်အတွင်းတွင် Yoma SMART Account နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော WavePay အကောင့်နှင့် ဖုန်းဘေလ်ဝယ်ယူခြင်း ၂၅% ပြန်အမ်းငွေလက်ဆောင်ကတော့ ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် အထိ ပရိုမိုးရှင်းကာလ အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါသည်။
၆) WavePay အကောင်ဖွင့်ပြီး Yoma SMART account နှင့်ချိတ်ဆက်ရာတွင် သတ်မှတ်ထားသောရက် အကန့်အသတ်ရှိပါသလား?
ဟုတ်ပါတယ်။ WavePay အကောင့်ဖွင့်ပြီး ( စတင်ဘာလ ၁၀ ရက် နေ့မှ ၃၀ ရက် အတွင်း) Yoma SMART အကောင့်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော WavePay အကောင့်များသာ ပရိုမိုးရှင်းအတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်။
၇) ယခု ပရိုမိုးရှင်းက ဘေလ်ပေးဆောင်မှုတွေကကော အကျုံးဝင်ပါသလား?
ဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်းများမှာ ယခုလက်ရှိ ပရိုမိုးရှင်းအတွက် အကျုံးမ၀င်ပါ။ ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ချင်း တစ်ခုအတွက်သာ ပရိုမိုးရှင်း ရှိပါသည်။
၈) WavePay အကောင့်နှင့် ငွေသွင်း၊ငွေထုတ်အပြင် အခြားအကျိူးကျေးဇူးတွေကော ရှိပါသလား?
၉) ဖုန်းဘေလ်ဝယ်ယူမှုအတွက် ကန့်သတ်ထားသော ပမာဏ ရှိပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့ ရှိပါတယ် .. WavePay အကောင့်မှ အများဆုံး ၁၀,၀၀၀ ကျပ်ထိ ဖုန်းဘေလ် ၀ယ်ယူသော သူများသာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
၁၀) ပြန်အမ်းငွေလက်ဆောင်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏ ရှိပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့ .. Customer တစ်ယောက်လျှင် တစ်လအတွင်း အများဆုံး ၁၀,၀၀၀ ကျပ်ထိ ပြန်အမ်းငွေလက်ဆောင် ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။
၁၁) Yoma SMART Account နှင့် WavePay အကောင့်ကို ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမလဲ?
1) Yoma Mobile Banking ထဲသို့ Login ၀င်ပါ။
၂) Mailbox ထဲသို့ ၀င်ပါ။
၃) Wave Linkage ကိုရွေးပါ။
၄)Subject နေရာတွင် Promo ဆိုပြီးဖြည့်ပါ။
၅) Message box တွင် WavePay အကောင့်နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
အကောင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းအတွက် ၅ ရက် ကြာမြင့်ပါသည်။
၁၂) ပြန်အမ်းငွေလက်ဆောင်ကို ဘယ်လိုလက်ခံရရှိ မှာပါသလဲ?
ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ပြီး ရုံးဖွင့်ရက် ၂-၃ ရက် အတွင်း WavePay အကောင့်ထဲသို့ ပြန်အမ်းငွေလက်ဆောင်အား ဖြည့်သွင်းပေးပါသည်။
၁၃) ပရိုမိုးရှင်း ကနေ ဖုန်းဘေလ်ဝယ်ယူပြီးပြန်အမ်းငွေလက်ဆောင် မရသေးတာ ဘာဖြစ်လို့ပါသလဲ?
၁၄) Yoma SMART Account နှင့် WavePay အကောင့်ကို ငွေလွှဲရင် လွှဲခ ပေးဖို့လိုပါသလား?
Yoma SMART အကောင့်မှ WavePay အကောင့်ထဲသို့ ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ငွေလွှဲခ ပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။
၁၅) WavePay အကောင့် နှင့် Yoma SMART Account ကို ငွေလွှဲရင် လွှဲခ ပေးဖို့လိုပါသလား?
WavePay အကောင့်မှ Yoma SMART အကောင့်သို့ ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ငွေလွှဲခ ပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။